Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Daley Blind Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-akọ akụkọ nke football nke kachasị mara aha; "Scholletje Junior". Ihe omuma anyi daringy nke umuaka n'akwukwo nke oma na ihe omuma ndi n'eme ka gi buru ihe omuma nke ihe omumu site na nwata rue ugbua. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya, njikọ ezinulo ya na ihe ndi ozo banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole ka ị maara ọtụtụ ihe gbasara Daley Blind's Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ndụ mbido
A mụrụ Daley Blind na ụbọchị 9th nke March 1990 na Amsterdam, Netherlands. A mụrụ ya nne ya, Yvonne Blind na nna Danny Blind.
Akụkọ Daley Blind anyị bụ akụkọ banyere nwata nwoke nwere ọgụgụ isi, mgbe ọ bụla a mụrụ ya, ọ ga - abụ onye a gọziri agọzi site na nna ya. Nna ya, Danny, tinyere ya n'ụlọ akwụkwọ nke nyere ya ohere igwu egwuregwu bọl n'egwuregwu n'oge egwuregwu.
Onye kpuru ìsì malitere ọrụ ya na ụlọ akwụkwọ ndị ntorobịa nke ụlọ ọrụ obodo ya, Ajax, otu ụlọ ebe nna ya bụ Danny mere aha ya dịka ọkachamara. N'agbanyeghị na papa ya nwere mmetụta, Daley ka nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya mezuo, ọchịchọ ya abụghịkwa ihe na-agafe agafe.
"Nna m nke bụkwa enyi m kachasị mma na-eji m ewepụta ihe dị mkpa dị ka ihe mascot ya n'oge egwu ya. Ọ zụtaghị m egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu mgbe m dị obere, naanị football. Ana m enwe ekele maka ihe niile o mere. Ọ na-agba m ume mgbe niile. Enweghị ya, agaghị m enwe njem a dị ịrịba ama nke m na-eme ugbu a. '
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ọrụ na Nchịkọta
N'etiti afọ 5 ruo 8 (1995-1998), Blind na-akpọ maka AFC (Amsterdamsche Football Club) nke nyere ya ezigbo ntọala maka bọl. N'ụlọ akwụkwọ ahụ, ya na onye nkuzi ntorobịa bụ Edwin Tielman, bụ nna ya. N'ebe ndị ọzọ iji lekwasị nwa ya nwoke anya, Danny kpebiri itinye nwa ya nwoke na Ajax agụmakwụkwọ ebe ọ bụ onye nkụzi.
Ịbụ nwa Ajax na Netherlands bụ Danny Blind nwere ike ọ gaghị adị mfe na ụmụaka ọ bụla na-eto eto. Olileanya dị elu na-esochi Daley Blind gburugburu, na mmalite n'oge ọ na-arụ ọrụ, o yiri ka ọ ga-esiri gị ike izute ha.
Site na mmetụta nna ya, Blind malitere ọrụ ọganihu na Ajax wee bilie site n'oge ntorobịa ahụ, na-enwetakwa onwe ya onye isi oche na otu. Ọ bụ site n'oge a ka nna ya biliri na otu onye òtù ọgbakọ.
Dị ka onye na-eme ihe bara uru, Blind na-aga n'azụ azụ, nku aka ekpe, azụ etiti na ebe nchekwa. Ọ hụrụ onwe ya na-emeri ọkwá anọ Eredivisie dị n'usoro ụlọ ọrụ. Site na nkwado siri ike na ezinụlọ ya, papa ya mesịrị bụrụ onye nchịkwa aka nke Netherlands. Nke a kwekọkwara na oge Daley Blind meriri otu ọkpụkpọ egwuregwu nke afọ maka Ajax na 2013, ya mere na-akpọ oku Louis van Gaal maka ọrụ otu mba.
Ọ bụ nanị ụbọchị tupu 2014 World cup na enyi nna ya Louis van Gaal nwetara ọrụ Manchester United. Blind Snr bụ onye nchịkwa na-elekọta ndị isi nke United n'oge iko ụwa na Brazil ma nwee obi ike na ọ ga-ekere òkè na nwa ya nwoke.
Naanị otu afọ mgbe asọmpi ahụ kwụsịrị kpọmkwem na 30 nke August 2014, Manchester United wee kwekọrịta iji banye Blind. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ndụ mmekọrịta
Football bụ osisi ọlaedo, ebe ọtụtụ nde ndị ntorobịa hụrụ ndò na ịhụnanya. N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwa, nwa nwoke ahụ mara mma magburu onwe ya. Onye kpuru ìsì kpuru anya ka ya na enyi ya nwanyị Candy-Rae Fleur nọ na-adị ogologo oge.
Candy-Rae bụ ihe nlereanya na ịgba egwu na ike maliteghachi nke gụnyere egwú na Robin Thicke na MTV EMA's. Ọ si Amsterdam na onye gụsịrị akwụkwọ na Hermann Wesselink College (2007 na-agụsị akwụkwọ). Dika akwukwo LinkedIn tinye ya, o na - aru ​​oru dika onye oru mgbasaozi mgbasaozi.
A maghị oge ogologo oge abụọ ahụ na-ejikọ ọnụ kama ha na-ele anya n'anya na foto dị n'okpuru ebe a.
Dị ka Daley Blind na-etinye ya; "M na-ahụ onwe m dị ka onye na-ahụ mgbe nile, na anyị, di na nwunye kwesịrị ekwesị. Echere m na ọ na-esiri m ike mgbe ụfọdụ maka enyi nwanyị m nwanyị Candy-Rae n'ihi na ndị na-eto eto bụ ndị pụtara pụtara ọtụtụ nlebara anya. Ịhụnanya nke ndụ m enye m nkwado dị ukwuu ma ana m agbalịkwa inye ya otu ihe ahụ. "
N'agbanyeghị ụzọ nkịtị si ezobe onwe ya ka ọ ghara ịhụ ya anya, Candy-Rae Feur gosipụtara na ọ na-eme ihe ngosi site n'ịkpọta ndị ọrụ ịgba egwú ya iji kwadoo enyi ya nwoke. Enwere okpu ihu "Otu ndị ìsì" bụ ụzọ ọhụrụ iji gosipụta nkwado maka onye agbachitere Manchester United.
Dị ka e sere n'elu, a hụrụ otu ọmarịcha blond na brunettes na ngwa ejiji "Mkpịsị aka kpakpando Blindback" nke ha jiri mee ka ndị Fans nabatara ha ka ha na-abanye n'ámá egwuregwu ahụ.
Candy-Rae hụrụ ejiji, ma ọ gaghị aga ahịa niile. Ọ na-eme ka o jide n'aka na ọ na-eyi ihe na-acha uhie uhie na maka nkwado mba, ihemama dị ka dị n'okpuru.
N'agbanyeghị na ị bụ enyi nwanyị na-agba afa, Candy Rae adịghị amasị ka a kpọọ ya WAG. O kwuru n'otu oge, sị: "Abụghị m WAG, enweghị m mmasị dị ka enyi nwanyị enyi. Ọ bụ ụzọ nke ọzọ! Ọ bụ nwoke ịgba egwú! "
Fleur kwukwara: "Ihe na-adịghị mma maka United, ọ bụla nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị ga-ese foto n'ebe ọ bụla ha na-aga. Mgbe anyị nọ na Ajax na mgbe ụfọdụ, anyị niile pụọ, ọ dịghị onye na-ese foto gburugburu.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ndụ nke Onye
Onye kpuru ìsì nwere ezigbo enyi, ya na ndị mmadụ dị iche. Ọ bụ onye na-enweghị ọdịmma onwe ya, na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla. A na - eji mmetụta ọmịiko na nkwupụta mmetụta uche Daley Blind ndụ. O nwere ọmịiko nke ukwuu ma nwee ntụkwasị obi nke ukwuu nye enyi nwanyị ya, Candy-Rae Fleur.
Ike nke Onwe: O nwere ọmịiko, nkà, na-enwe mmetụta, dị nro, maara ihe ma dị egwu maka enyi nwanyị ya bụ Candy-Rae Fleur.
Ahụghị Onwe Onye: Ọ nwere ike ịtụ egwu, tụkwasị ntụkwasị obi obi, mwute ma nwee ọchịchọ ịhapụ eziokwu.
Kedu ihe Daley Blind Wikes: Ịnọ naanị ya na Candy-Rae Fleur, ihi ụra, egwu na mmekọrịta ịhụnanya na ya.
Ihe Daley ndị isi na-achọghị: Ndị mmadụ na-azọrọ na ha maara-ya-niile, na-akatọ, oge gara aga na-alọghachi na-ezute ya na obi ọjọọ nke ụdị ọ bụla.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ndụ Ezinụlọ
Daley Blind na-abịa site na nzụlite ezinụlọ dị elu. N'ụlọ ahụ kpuru ìsì, ọ bụ egwuregwu kachasị mkpa. Ma ụlọ ahụ adịghị ejupụta n'ụgbụgbọ ụkwụ elu ka ha dịkwuo karịa nwanyị karịa ụmụ nwoke. Ugbu a, anyị na-ewebata gị ndị òtù Daley Blind Family.
Nne: Nne Daley Blind Yvonne Blind na di ya di n'okpuru ya.
A maara Yvonne Blind dịka onye nyere nwa ya nwoke, Daley aka ịkwaga Manchester United. Obere akwụkwọ nke Yvonne Blind na-akọwa oge mgbe ya na di ya na-etinye aka na mberede okporo ụzọ na 2006. Onye nke ọzọ na-etinye aka na ihe mberede ahụ (onye ahụ a tara) ga-ebipụrụ ya n'ụgbọala ma buga ya n'ụlọ ọgwụ.
Di Yvonne kwuru na ọ na-ewute ya, sị: "Eziokwu ahụ bụ na m nọ ọdụ n'azụ ụgbọala ahụ na-aba n'anya na-abaghị uru ọ bụla ma ghara inwe ihe ọ bụla merenụ. Enwere m ihere nke ukwuu ma chọpụta na onye nọ n'ọkwá m kwesịrị ibu ọrụ. Na nke a emebeghị ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mgbu. "
Ndị nne na nna: Nna nna Daley Blind na Hellevoetssluis. Ọ bụ onye a ma ama na Zeeland Ebe ndị Dutch na-ekele ọrụ ya dị oke mma na ụlọ ọrụ ike. Nne nne Daley Blind si Vlissingse, obodo dị na South West Netherlands. O nwere nwanne nne nna ya, bụ onye ọ na-ata ahụhụ ma hụ ọnwụ ya site na mberede ọnyà.
SISTERS: Daley Blind nwere ụmụnne nwanyị abụọ dị ịtụnanya n'aha; Zola na Frenkie isi.
Site n'ile anya na foto ha, o yiri ka Zola emeela okenye karịa ya na Frenkie bụ obere. Zola nyekwara nwanne ya nwoke nwoke aka.
Nna: Ekele maka isi ụlọ, Bọọ bụ ihe omume ezinụlọ maka ezinụlọ ndị ahụ kpuru ìsì. Onye kpuru ìsì na-amalite ọrụ ọrụ ya dịka onye nchebe ziri ezi.
Ọ kwụrụ na 29 August 1979 na football ọkachamara na Sparta. Na July 1986 Blind gara Ajax, na-ekele director director technique bụ Johan Cruijff. Danny Blind nwetara akara ndị a mgbe ọ na-egwu egwu ụbọchị; Njikọ Njikọ (1995), European Cup II (1987), iko UEFA (1992) na World Cup (1995). Ọ na-agwakọta egwuregwu 537 na njikọ Dutch ma na-agụ 45 ugboro ugboro. Danny na nwa ya nwoke Daley zuru oke mgbe o na-egwu egwu.
Danny jisiri ike na Eredivisie ndị mmeri, Ajax na 2005 tupu ya etinye aka na mpaghara Dutch, n'okpuru Van Gaal na 2012. Na 2017, a chụpụrụ ya dịka onye nchịkwa ndị enyemaka mba na-ahụ maka nsonaazụ na-adịghị mma. N'ịbụ onye a mụrụ na East Souburg, Danny na-egwu Sparta Rotterdam, Ajax na ndị otu ndị football na Dutch. Na Ajax, ọ na-ewu ewu nke ukwuu na ndị nduzi ụlọ ịgba chaa chaa nyere ya ọrụ dịka onye na-enye ọzụzụ ma emesị mee ya onye otu na-arụ ọrụ.
Danny Blind nwere ezigbo ọrụ dịka onye na-agbachitere Netherlands. Ọ bụ nanị onye nyocha bọl na Dutch nwere mmeri ndị asọmpi egwuregwu zuru ụwa ọnụ ndị UEFA na FIFA ghọtara.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ọ bụ Theresa Smalling hụrụ ya n'anya
Chris Smalling otu ugboro ka mama ya na-achọ Daley Blind karịa ya.
Mgbe Fans na-ekwu na ọ bụ Daley ka ọ bụ n'ihi ọrụ nta nke Chris Smalling, otu okwu onye kwuo okwu mere ka iwe dị egwu dị ka nke dị n'okpuru.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Ike Ike
Dị ka onye na-agbachitere ndị na-agbachitere, Blind nwere mmasị ịkụda egwuregwu ma mee ngwa ngwa iji merie ihe mmeri. Dị ka azụ, ọ yiri ka ọ maara kpọmkwem oge ọ ga-esi na-aga n'ihu nakwa mgbe ị ga-ala azụ. Isi ihe a nile bu ihe omuma nke ndi nzuzu.
N'ihe banyere ike ya, ọ bụ maka ime ihe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị.
Daley Blind Childhood Story Plus Na-enweghị isi akụkọ ihe mere eme -Akwụsị ọrụ nlekọta
Enwere ike ịkatọ na Daley Blind bụ onye na-echebe onwe ya nke na-adịghị ahụ ike n'ụzọ anụ ahụ ma ghara inwe ike ịkwalite ihe dị mma, karịsịa nye ndị ike dị ike.
Mgbe ọ na-ekiri ya, otu ga-ekwubi na ọ na-ele obere adịghị ike. Dika ihe zuru oke, enweghi ike ime ka o nwe nsogbu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Daley Blind Childhood Akụkọ nke a na-agbakwụnye eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.